Maitiro ekukwiridzira kune Debian 8.3 kubva kuDebian 8.2 | Linux Vakapindwa muropa
Mushure meDebian 8.2 kunouya yekuvandudzwa kwazvino kubva kunharaunda yekusimudzira yeDebian, iyo distro Debian 8.3. Unogona kusarudza kurodha pasi ISO zvakananga kana usina Debian parizvino kana kukwidziridza yako Debian distro kune iyi yazvino vhezheni kubva kuDebian 8.2. Uku ndiko kusununguka kwakasununguka, wechitatu waDebian 8 Jessie. Debian 8.3 inounza maficha nyowani uye pamusoro pezvese zvakakosha kuvandudzwa pane yapfuura kuburitswa.
Debian 8.3 pamusoro pezvose implements security updates yeiyo inoshanda sisitimu, chimwe chinhu chakanyanya kukosha. Uye zvakare, iwo mapurogiramu akatoiswa neakasarudzika anovandudzwa senguva dzose. Zvese izvi kuvandudza uko kungave kusiri kwekuratidzira kunoshamisa, asi chiitiko chakakosha chevashandisi veDebian. Unogona ona shanduko dzese zvizere mune iyi link.
Debian kunobva vamwe vazhinji uye nekudaro rese iri basa haringogumiri chirongwa cheDebian chaicho, asi zvakare mamwe mapurojekiti anoshandisa izvi sehwaro, senge Ubuntu. Zvakanaka, kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchiita.
Ona yazvino vhezheni:
Iye zvino isu tinogadziridza zvinyorwa:
Isu tinogadziridza mapakeji kubva kudistro:
Tinogona ona mhedzisiro na:
Imwe sarudzo ndeye dhawunirodha iyo Debian 8.3 ISO kubva pawebhu. Iwe uchaiwana ichiwanikwa kune akasiyana maumbirwo uye mune akasiyana mafomati, senge ekumisikidza kubva kunetiweki, kwemaCD kana madiki-anokwanisa maUSB, kana iyo Live kana isingagadzike mufananidzo weanoshanda system. Ndinovimba unonakirwa neichi chikuru distro ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Maitiro ekukwiridzira kune Debian 8.3 kubva kuDebian 8.2
Ndine ubuntu mate, ndinofungidzira ndichave nezvose izvi ne16.04 asi ikozvino pandinofunga nezvazvo chii chingaitika kana vakamira uye is xir xD